Kufungidzira 3D | Shenzhen V-Plus Technologies Co, Ltd.
Telecentric lenses inogadzira zviyero chaizvo
Telecentric lenses inowedzera imwe yekuwedzera nhanho kune chaiyo muchina-maonero masisitimu.
NaAndrew Wilson, Mupepeti
Mune akawanda masisitimu-ekuona masisitimu, senge iwo anoshandiswa mune semiconductor kuongorora, chaiwo anodzokororwa zviyero zvinofanirwa kuitwa zvinogara zvichiteerana. Kuti uone kuti izvi zvinoitika, vanogadzira masisitimu vanofanirwa kutendeukira kune anodhura masystem emagetsi akavakirwa pamalenzi eterescentric ayo ekufananidza nawo zvikamu izvi. Zvakawanda zvezvikonzero zvekusarudza telecentric lenses zvinobuda kubva mukukanganisa kweakawanda akajairwa lens masisitimu.
Semuenzaniso, kana chinhu chikafamba kunyange zvishoma mukati mekudzika kwemunda weyakajairwa lens system, pachave nekushandurwa kwekusimudzira shanduko. Munguva yakapfuura, kukudzwa kwekuchinja nekuda kwechinhu chinosimudzwa kwakayerwa kuburikidza neimwe yekuwedzera kamera kana yakadzika sensor inoteedzera nhambwe iri pakati pe lens nechinhu. Iko kushandiswa kwe lens telecentric kunogona kudzikisira kana kubvisa zvachose shanduko dzekukudza uye nekudaro kubvisa kudiwa kwekamera yekuwedzera uye kugadziriswazve kwemufananidzo wedhata izvo zvingangodikanwa kuti zvigadzirise chero zvikanganiso zvekukudza.
Maonero kana zvikanganiso zveparallax zvinogona zvakare kubviswa nekushandiswa kwema telecentric lenses. Mune echinyakare masystem, zvinhu zvepedyo zvinoita kunge zvakakura pane izvo zviri kure nekuti kukudzwa kwechinhu kunochinja nedaro rayo kubva kune lens. Nekudaro, matelentric lenzi anonyatso gadzirisa iyi parallax kukanganisa kuitira kuti zvinhu zvirambe zvakaenzana zvakaenzana saizi yakazvimiririra kune yakatarwa daro kubva lens.
Kana standard optics yashandiswa kuratidza zvinhu zve3-D, zvinhu zviri kure zvinozoonekwa zvidiki pane izvo zviri kure. Nekuda kweizvozvo, kana chinhu chakadai sedenderedzwa rakakomberedzwa richifananidzirwa, iwo ekumusoro uye ezasi madenderedzwa edenderedzwa anoita kunge akaomarara uye madziro emukati esirinda akafananidzwa (zvakajairika maziso anozvibata semeso emunhu kana akatarisa mukati memukombe kana girazi) . Nekudaro, nekushandisa telecentric optics, yepazasi pamupendero uye yemukati madziro anonyangarika uye nekudaro iyo telecentric lens inopa maonero e2-D yechinhu che3-D, ichiita iyo muchina-kuona system inoshanda zvakanyanya kana zvishoma seCAD software (ona Fig. 1 ).
Telecentricity inotsanangura kuti huwandu hwekusimudzira chinhu mukati memunda wekutarisa (FOV) chinoshanduka sei nechinhu chinhambwe. Nekudaro, kune iyo iyo FOV, zvinhu zviri kuverengerwa nehurefu hwakareba-kureba lenzi zvicharatidza kushoma kwekuchinja kwekukudza pane izvo zviri kuratidzwa nekfupi yakakosha-kureba lens. Nekuti malenses etelecentric anoita sekunge ane urefu husingagumi hwekutarisa, kukudzwa kwakazvimiririra nechinhu chinhambwe. Kunyangwe zvinhu zvichiswededzwa padyo kana kupfuurira kubva kulenzi zvinogona kusiyana mukutarisa, saizi yemufananidzo wechinhu ichi ichagara iri.
Iyo mwero we telecentricity yeiyo chaiyo lens inoyerwa nemukuru ray kana telecentric angle (ona Fig. 2). Nepo mwero wekushambadzira lenzi ungave uine telecentric angles e10 ° kana kupfuura, telecentric lenses ane main ray angles asingasviki 0.1 °. Kuti uwane iyi nhanho ye telecentricity, chinhu chinangwa chinofanira kunge chakakura kupfuura iyo FOV yechinhu chinofanirwa kuvezwa, ichigadzira lenzi dzakadai kukura uye nekudaro dzinodhura.
Mukusarudza lens telecentric yeimwe michina-yekuona mashandisirwo, masystem masisitimu anofanirwa kunzwisisa ese ari maviri terminology anoshandiswa neakazvimiririra vagadziri uye nemashandisirwo enzira kuseri kwega yega lens dhizaini Kazhinji, malenzi etelecentric anopihwa sechinhu-nzvimbo, mufananidzo-nzvimbo, kana zvakapetwa kana bi-telecentric dhizaini (ona Fig. 3). Nepo vagadziri vazhinji vachipa aya marudzi emalensi, mufananidzo-nzvimbo telecentric lenses anowanzo shandiswa mumifananidzo yekuratidzira michina uye zvisingawanzo mumushini-chiratidzo chekushandisa.
Mune lens telecentric, mwenje mukuru kuburikidza nepakati pemusuwo wekupinda kana wekubuda unoenderana neiyo optical axis, kune rimwe kana mativi ese e lens, zvichienderana nerudzi rwe lens inoshandiswa. Mune masisitimu-ekuona masisitimu, anonyanya kushandiswa emhando idzi dzenzvimbo yechinhu-parutivi telecentric. Mune aya magadzirirwo, mwaranzi mukuru wakaenzana nechinhu chiri kuyerwa, uye iyo lens system inoshandiswa kutarisisa mufananidzo kune iyo CCD kana CMOS kamera. Nekuti malenzi aya anongori telecentric padivi pechinhu, mashoma malenzi zvinhu anodikanwa pane nema bi-telecentric lenses, zvichikonzera mutengo wakaderera.
Zve 2 / 3- kana 1/2-mukati. fomati sensors, Edmund Optics inopa maviri akateedzana echinhu-parutivi telecentric lenses mune yayo Techspec Goridhe Series. Ipo iyo 2/3-mukati. dzakateedzana dzinosanganisira lenses shanu dzekushandisa pamwe ne2 / 3-in. kana ma sensors madiki, iyo 1/2-in. dzakateedzana dzinosanganisira mana malenzi ekushandisa ne 1/2-in. kana ma sensors madiki. Iyo 1/2-mukati. akateedzana anowedzera kufukidzwa kwemunda nekufananidza iwo akakurisa maFOV kukosha kweiyo 2/3-in. dzakateerana, dzinobvumira minda mikuru ine madiki makamera Aya malenzi anoburitsa kukudzwa kusingaperi pamusoro pechimiro chakatsanangurwa chebindu uye inopa mashoma pane 0,2 ° telecentricity munzvimbo yakatarwa yekushandira.
Chinhu uye nzvimbo dzemufananidzo
Mazhinji chinhu-nzvimbo telecentric lenses dzinopihwa neakagadzika akakosha ekutarisa. Nekudaro, mune mamwe mashini-ekuona mashandisiro zvinogona kuve zvakafanira kuti uwedzere optically kukura saizi yemufananidzo wakatorwa. Kugadzirisa izvozvi, mamwe makambani anopa telecentric zoom lenses ayo anotendera mushandisi kushandura kureba kwakatarisana panzvimbo yemufananidzo achichengetedza telecentricity padivi rechinhu che lens. Kuti uwane izvi, telecentric zoom-lens masisitimu anofanirwa otomatiki kufambisa kumberi-kumagumo optics uye nekumira pakati pekumberi nekumashure lenzi pamitengo yakasiyana. Nekuti aya maseru masisitimu akaomarara kupfuura akagadziriswa-akareba-malensi, zoom telecentrics inopihwa neanoverengeka makambani.
Iyo 12x telecentric zoom-lens system kubva kuNavitar, semuenzaniso, inopa telecentricity kune isingasviki 0.3 ° uku ichiramba ichitarisa kuona uye kukudza. Iine kufukidzwa kwemunda kubva pa50 kusvika ku4 mm pane chinhambwe che188-mm yekushanda, iyo 12x telecentric inopa kureba kwakatarisana pakureba pamusoro pe 0.16x kusvika 1.94x yekukura renji.
Mune zvimwe zviitiko, kunyanya kune yakanyanya-chaiyo zviyero, bi-telecentric lenses inopa telecentricity mune zvese chinhu uye mapikicha ndege dzinofanirwa kushandiswa kudzikisira mhedzisiro yekupararira kwemaziso uye kukanganisa kwejometri. Nekuti malenzi maviri eterecentric ane akareba asingagumi, saizi yemufananidzo haizosiyana pane iyo FOV nekuda kwenzvimbo yenzwi. Nekudaro, bi-telecentric dhizaini inogona kuve nekukura kukuru kwekuwedzera kwemunda uye nharaunda yakakura pamusoro pechinhu icho chiri kuratidzwa chinogona kufamba uchiri nekuchengetedza kukudzwa kumwe chete.
Izvi zvinonyanya kukosha nekuti maCMCD uye maCMOS sensors anoenderera mberi achigadzirwa nemapikisi madiki uye madiki. Kubatsira kutarisisa mwenje pama pixels ega ega, vatengesi vemifananidzo ikozvino vari kuisa maclenlen arrays pama sensors avo. Akaiswa pamusoro peumwe neumwe pixel, aya malenzi anonyanya kushanda kana mwenje inopinda inoparadzanisa 5 ° kana zvishoma pane zvakajairwa. Nekuda kweizvi, bi-telecentric lenses, uko telecentricity iripo pane zvese chinhu nemufananidzo divi re lens, inogona kutarisisa inopinda mwenje mune zvinobudirira. Kunyangwe aya malenzi ari anodhura kupfuura chinhu chimwe-padivi telecentric lenses, ivo vanowedzera iko kurongeka kwechinhu kuyerwa.
Imwe mukana webi-telecentric lenses ndeyekuvhenekera. Nekuda kweimwe chaiyo nzira yemwaranzi iri munzvimbo yemufananidzo uko ma ray ray ari kurova iyo detector pamusoro pamwe neyakafanana mafungiro, mapikisheni anovhenekerwa neiyo imwechete simba pamusoro pehukuru hwese hwedhijitari. Iyi ficha haina kunyatso kuzivikanwa, asi inogona kubatsira zvakanyanya kune izvo zvinoshandiswa apo homogeneity yemavara inofanirwa kudzorwa.
Lenses inopihwa nemakambani akati wandei anosanganisira V-Plus Technologies, Navitar, Schneider Optics, uye Sill Optics. Schneider Optical's Xenoplan bilateral telecentric lenses, semuenzaniso, zvakagadzirirwa kushanda ne2 / 3-in. fomati CCD makamera uye iine inogadziriswa iris uye anotarisa ekudzora. Aya akasarudzika ekutarisa-kureba lenzi ane mashanu mashanu akasiyana mamodheru ane akasarudzika magnification: 1: 1, 1: 2, 1: 3, 1: 4, uye 1: 5.
Sekutaura kunoita Rolf Wartmann weSchneider Optics, apo bi-telecentric lenses isingashandiswe seyero yekuyera lenses, asymmetric kana yekukuya mifananidzo yekumusoro inomuka kana uchidzvanya. Izvi zvinotungamira mukuonekwa kusinga tsanangurike kwemipendero, nemhedzisiro yekuti mwero wekururamisa unofungidzirwa kuti zvinogoneka zviri pachena kuti hauna kuzadzikiswa. Mabhaisikopu emagetsi emagetsi haaratidzi zvikanganiso izvi, uye nokudaro zvinoita kuti zvikwanisike kuti usvike padanho rechokwadi rechokwadi (ona www.schneiderkreuznach.com/nowhow/telezentrie_e.htm).
Chinhu-nzvimbo telecentric lens masisitimu anofanirwa kuve nechinhu chepamberi icho chakati kureba kunge FOV. Nekuda kweizvi, yakajairwa chinhu nzvimbo telecentric lens yekutarisa kunyangwe 16-in. munda zvese zvinodhura uye zvinorema kwazvo (ona Fig. 4). Kuti ukunde izvi, makambani akadai seLightWorks akagadzira lenses dzema telecentric dzinosanganisira lenzi dzeFresnel kudzikisa huremu, mutengo, uye urefu. Fresnel-based telecentric lenses inowanzo gadzirwa neyemberi chinhu cheFresnel fomu yakafanana neplano-convex kana plano-concave lens iyo inotemwa kuita zvindori zvakamanikana uye zvakapetwa kunze. Kazhinji iyo Fresnel lens inogadzirwa neyakaonda, yakapetwa yakaumbwa epurasitiki, uye iyo yekumashure chinhu kana zvinhu zvakagadzirwa neyakajairika optics.
Kune imwe chete bhenefiti yakakura yekushandisa Fresnel lenses sechikamu cheiyo telecentric system-ivo vanogona kuvakwa kuti vagare akakurisa maFOVs kupfuura zvaizove zvinoshanda kana kutogoneka. Muganho unoshanda weyakajairika telecentric lens inogona kunge iri munzvimbo dzinosvika gumi nemaviri kusvika gumi nematanhatu mukati. Chiedza Mabasa chakagadzira uye chakavaka Fresnel-based telecentric masisitimu eFOVs akakura se42 mukati.
Kunyangwe pavakanakira, Fresnel lens-based masisitimu ane mashoma. Nekuti maFresnel lenses haana kugadziriswa kwemavara, zvinowanzove zvakanaka kuti uashandise neanenge mwenje monochromatic senge masosi eLEM. Zvikasadaro, pane mukana wechitarisiko chemavara emapendero akatenderedza zvinhu zviri kuratidzwa. Zvakare, zvichienzaniswa neakajairika lenzi, iyo yemhando yemhando kubva kuFresnel lens iri pane yakaringana kurongeka uye inogona kunge isiri sarudzo yakanaka mune yakanyatsojeka gauging kunyorera kana yekuona zvidiki zvikanganiso. Kurasikirwa kwechiedza kubva kuFresnel lens zvakare kune yakakura nekuda kwekupararira kwechiedza pamaburi eiyo lens uye nekushayikwa kweanodzivirira maficha pane iyo lenzi pachayo. Zvakangodaro, kune mashoma-resolution ekushandisa iyo Fresnel-based telecentric lens inogona kunge iri mhinduro inoshanda uye inodhura.
Sezvineiwo, Canon inotaura kuti yakakunda matambudziko akasangana nealensi akadaro neayo diffractive optics (DO) tekinoroji, iyo inoshandisa maviri-masendimita akasiyana masisitimu emagetsi ane dhizaini yekubatanidza inosunganidzwa pamwe chete chiso nechiso (ona Fig. 5). Sezvo marefu wavelengths achigadzira chifananidzo padyo ne lens nekuda kwenzvimbo hombe yekuparadzanisa, uye mapfupi emarevhefomu anogadzira chifananidzo kure kure nelenzi nekuda kwekona kadikidiki, kuisa zvinhu zveDO pamwe neakajairika magirazi optics anodzima chromatic aberrations (ona Canon Webhusaiti). Nehurombo, kushandiswa kweiyi tekinoroji haisati yawana nzira yayo mu telecentric lens-based dhizaini.
Pericentric optics inopa 360 ° maonero
Mazhinji mashini-ekuona masisitimu anoshandiswa kuongorora anopfuura rimwe chete kumeso kwechimedu, uye mune dzakawanda zviitiko 100% kuongorora kweye cylindrical kana idenderedzwa pamusoro kunodiwa. Munguva yakapfuura kuongorora uku kwakaitwa kuchishandiswa makamera akaiswa akatenderedza chikamu, kamera imwe neimwe ichitora mufananidzo weimwe divi kana chikamu chechidimbu.
Nehurombo, iyi nzira inowedzera sisitimu inodhura nekuda kwenhamba yemakamera anodikanwa. Uye zvakare, icho chinhu chiri kuratidzirwa chinofanira kuve chakamiswa chaizvo, nekuti kamera imwe neimwe inofanirwa kuenzanisa chidimbu pane imwe kona. Kukunda matambudziko aya nzira dzakajeka dzakagadzirwa zvekuti kamera imwe chete inodiwa kuti uwane mufananidzo wezvinhu zvese zvepanyika.
Aya malenzi anonzi pericentric nekuda kwenzira yemwaranzi mukati mechinangwa - mudzidzi wekuzarura anoonekwa kubva pachinhu nzvimbo sekufamba kutenderera nharaunda yemupendero yeboka remberi re optical. Vanoda kamera imwe chete kuti vatore mufananidzo wepamberi pechinhu uye nemativi ayo akapoterera. Kana iyo lens inoratidzira chinhu chesilindrical zvese zviri kumberi uye iyo cylinder pamusoro zvinoratidzwa panguva imwe chete.
Kubatsira kweiyi nzira, inowanzo shandiswa kuongorora zvikamu zvakaita semabhodhoro egirazi, magaba ealuminium, uye zvimwe zvigadzirwa zvevatengi, ndezvekuti zvese zvinhu zvechinhu zvinogona kufananidzwa mune imwechete furemu uye zvinogona kugadziriswa neiyo imwechete algorithm kuwana flat mumiriri weiyo cylindrical pamusoro.
Matipi - Hot Zvigadzirwa - Sitemap Telecentric Zoom Lens, Yakakura Fomati Yakakura Angle Lens, Yakagadziriswa-Focus Lens, Uv Dmd Lens, Bi-Telecentric Lens, Chinhu Chinonzi Telecentric Lens,